Buru na blọọgụ | Martech Zone
Buru na blọọgụ
News.com - Bearish na blọọgụ
Forbes.com - The MySpace Afụ
Di na nwunye ederede mara mma na ntiwapụ nke blọọgụ. Dị ka ọ bụla 'afụ', ndị folks na-ekwu okwu banyere 'mgbawa' ahụ. Ihe m na-eme bụ na Nick Denton anaghị enweta 'bearish na blọọgụ', ọ na-agbada na blọọgụ ọjọọ dị ka isi mmalite ego. Blọọgụ ga-aga n'ihu na-etolite oge na-esonye n'akụkụ ọ bụla nke web. Agbanyeghị, dịka ọ nwere weebụsaịtị ọ bụla, ọdịnaya ga-abụrịrị eze. Ọ bụrụ na ị naghị ede ihe karịa onye ọzọ, ndị mmadụ ga-agwụ ike wee pụọ.
Maka ụlọ ọrụ dị ka Maazị Denton bụ ndị na-eji blọọgụ dị ka isi mmalite ego, nke a pụtara na ntinye ọ bụla nke blog kwesịrị ịbụ onye na-egbu egbu. Enwere nnukwu ihe egwu dị na ntinye ego ịgba chaa chaa maka ọdịnaya - ọkachasị mgbe enwere ọtụtụ ijeri peeji nke ọdịnaya ebe ahụ.
Anaghị m ede blọgụ maka ego ahụ (agaghị m eri ma ọ bụrụ na m mere). Kama, m ga-akpọtụrụ ndị enyi m, ndị ezinụlọ m, yana ndị ọkachamara ụlọ ọrụ ndị ọzọ. Nke a bụ ebe m ga-eji kerịta echiche m ma tụlee echiche ndị ọzọ. Ọ na-enye m ikpughe na rịọ nzaghachi site n'aka ndị m na-asọpụrụ.
Tags: bearish na blọọgụblogịde blọgụForbesMyspacemmmmmmmmmmmmmna myspace afụ
Onye nke Anọ? Onye nke ise? Tọ asụsụ na andzụ ahịa